अझै ३ हप्ता लकडाउन गर्न डा. पाण्डेको यस्ता छन् सुझाव – Everest Pati
काठमाडौं। जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रवीन्द्र पाण्डेले अझै तीन हप्ता कडा लक–डाउन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा लेख्दै उनले आगामी तीन हप्ता विश्वको लागि निकै पीडादायी हुने समेत बताएका छन् ।
यस्तो छ उनले दिएका सुझाव : आगामी ३ हप्ता विश्वको लागि निकै पीडादायी हुनेछ । संक्रमित तथा मृतकको संख्या अकल्पनीय रुपमा बढ्नेछ । यो ३ हप्ताको अग्निपरीक्षा पास गरेपछि आकासबाट आशाका किरण झुल्किने छन् । यो सम्पूण विश्वले आगामी ३ हप्ता कर्फ्यु स्तरको लक डाउन गर्नु जरुरी छ ।
– अन्तराष्ट्रिय निकायहरुले अहिले सामाजिक दुरीमात्र होइन परिवारभित्र पनि दुरी कायम गर्न अपिल गरिरहेका छन् । – सरकारले बिपन्न बर्गलाई तुरुन्त न्युनतम १ महिनाको राहत प्रदान गरोस ।
– स्वास्थ्यकर्मीलाई अस्पतालको नजिक कुनै होटेलमा बस्ने ब्यबस्था गरोस । पीपीईलगायत गुणस्तरीय उपकरण ( कमिसन नखाइ ) प्रदान गरोस् । – यो महाबिपत्तिमा सराकर, जनता सबै मिलेर, सबैजना आत्म अनुशाशन र जिम्मेवार भएर लड्नुको बिकल्प छैन ।